Rasaasa News – Tobanka Haween ee Aduunka Ugu Awooda Badan
Home / News in Somali /
Tobanka Haween ee Aduunka Ugu Awooda Badan
on March 10, 2012 12:00 am
Jijiga, Mar 10, 2012 [ras] – Warsidaha Forbes Magazine oo sanad walba qiimayn ka soo saarta heerka awooda Haweenka Aduunka ayaa soo saartay Liistadan aan tobanka Ugu Horeeya soo qaadanay
Forbes Magazine ayaa sanadkii 2004-tii waxay qortay qormo ay ugu magac dartay [10ka Haween ee ugu awooda badan aduunka] arintaas oo noqotay mid aad loo xiiseeyo qiimaynta haweenka.
Wargayska ayaa dhawaan soo saartay qiimaynta sanadkii 2011, oo ay ku samaysay Haweenka aduunka ugu awooda badan. Waxaa ugu horeeya tixa magacyada awooda badan ee haweenka aduunka R/wasaarada wadanka Jarmalka Angela Merkel.
Merkel waxa qiimaynta kaga hor martay haweenayda xoghayaha arimaha dibada wadanka Mareykanka Hiliry Clinton oo ah Afada Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton.
Haweenaydii ku guulaysatay qiimayntii sanadkii 2010-ka waxay ahayd Micheal Obama, haatan tax magacyada qiimaynta waxay kaga jirtaa kaalinta 8aad.
1. Angel Merkel
57 jir – R/wasaarada wadanka Jarmalka iyo gudoomiyaha xisbiga Christian Democratic Union [CDU], muran la,aan waa haweenayda hogaamisa EU.
waxay ku dhalatay Bundestag, July 17, 1954. Intii ay hogaanka haysay waxay kor u qaaday dhaqaalaha iyo Siyaasada Jarmalka waxayna ka dhigtay mid ka dhex muuqdo saaxada aduunka.
2. Hillary Diane Rodham Clinton
63 jir – xoghayada arimaha dibada ee wadanka Maraykanka, waxay ku dhalatay magaalada Chicago Sanadkii 1947, waxaa qaba madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton.
3. Dilma Rousseff,
63 jir – madaxweynada wadanka Brazil, waxay ku dhalatay Magaalada Bela Horizonte, December 14, 1947.
Brazil waxay ku jirtaa 7-da wadan ee aduunka ugu dhaqaalaha xooga badan.
Dilma waxay ku guulaysatay in ay ka hor tagto musuq maasuq badan oo ka jiray wadanka Brazil.
4. India indra Nooyi
55 jir – maamulaha guud ee shirkada cabitaanada Pepsi Cola. waxay ku dhalatay magaalada Chennai ee wadanka India,October 28, 1955. Waxay haysataa dhalashada wadanka Mareykanka.
Waxay ku guulaysatay kor u qaadida lacagta macaashka ee shirkada Pepsi Cola oo noqtay US$60 bilyan.
5. Sheryl Sandberg
42 jir – madaxa shaqada bogga caanka ah ee Facebook. Waxay ku dhalatay magaalada Washington, August 28, 1969.
Waxay ku guulaysatay in ay sare u qaado isticmaalka bogga Facebook.
6.Melinda French Gates
47 jir – daryeesho, waana afada taajirka Bill Gate, aas aasada hayada daryeelka ee [Bill & Melinda foundation]. Waxay ku dhalatay magaalada Dallas, gabalka Texas August 15, 1964.
Waxay ku guulaysatay hayadeedu in ay ku caawiso dadka baahan mallaayiin dollar.
7. Antonia Edvige Albina Maino (Sonia Gandhi,)
64 jir – talyaani, waxaa qabi jiray R/wasaarihii Hindiya Rajiv Gandhi. Sonia Gandhi, waa madaxwaynaha Xisbiga Congress-ka Qaranka India. Waxay ku dhalatay Magaalada Veneto ee dalka Talyaaniga, sanadkii 1946.
8. Michelle LaVaughn Robinson,
47 jir – Afada madaxweynaha Maraykanka. waxay ku dhalatay Magaalada Chicago January 17, 1964.
Michelle Obama waxaa lagu xantaa in ay ka caansan tahay ninkeeda Madaxweyne Obama. Micheal waxaa lagu amaanaa kartida dheeriga ah ee ay ka muujisay , qorshaha lagula dagaalamo Cayilka xad dhaafka ah ee Caruurta aan qaan gaadhin.
9. Christine Madeleine Odette Lagarde
55 jir – Looyarad, waana maamulka guud ee hayada lacagta aduunka [IMF], Waxay ku dhalatay Magaalada Paris ee wadanka Fransiiska.
Christine waa Haweeneydii ugu horaysay ee Madax ka noqota Hay’ada lacagta aduunka [IMF] July 2011.
10. Irene Rosenfeld
58 jir – maamulada guud ee shirkada Kraft, oo samaysa cuntada. waxay ku dhalatay magaalada New York, May 3, 1953.
Irene waxay masuul ka tahay shaqaale ka badan 127,000.
JWXO, Jijiga Way Joogtaa! Xafladaha iyo Qaraabo Sallaanku Kolka ay Dhamaadaan Maxaa Xigi?
Ethiopian PM accuses Egypt, Sudan of backing unrest in western region May 5, 2021
Somali Region Loosing Patience March 28, 2021
Ciidamada Eriteriya oo la Geeyay Aaga Lagu Muransan Yahay ee Isku Haya Suudaan iyo Itoobiya March 24, 2021
Addis Pushes Back Against International Pressure Over Tigray March 23, 2021
Tigray Genocide Was Carried Out by Ethiopian and Eritrean Forces March 21, 2021
‘Practically this has been a genocide’ March 20, 2021
Copyright © 2021 Rasaasa News. All Rights Reserved.